म त्यसैले युवा विवाह किन गर्यो: From My Wife's Perspective — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
म त्यसैले युवा विवाह किन गर्यो: मेरी पत्नी दृष्टिकोणबाट
बारेमा एक महिना पहिले म त जवान विवाह किन मान्छे बताउन ब्लग लेखे. म गहिरो यो पढ्ने सबै प्रतिक्रियाहरू द्वारा प्रोत्साहन थियो र मेरो प्रार्थना प्रभु हामीलाई विवाहबारे थप biblically सोच्न मदत गर्ने भएको छ. तपाईं पढ्न प्राप्त गरे भने कि मूल पोस्ट यहाँ यो जाँच: म किन विवाहित त्यसैले युवा प्राप्त गर्नुभयो?
यति धेरै मान्छे मलाई पुग्यो र तिनीहरूलाई लागि थियो कसरी उपयोगी मलाई भन्नुभयो राम्रो पछि, म यो मेरो पत्नी दिनु जस्तै उपयोगी हुनेछ लाग्यो, जेसिका, उनको दृष्टिकोण देखि नै प्रश्नको जवाफ. त्यसैले यहाँ यो छ. के गरे मेरो पत्नी निर्णय त जवान विवाह गर्न? उनी भन्छिन् ...
1. म एक ईश्वरीय मानिस फेला
जब म पहिलो यात्रा पूरा, म कुनै पनि बेला चाँडै विवाह रही मा योजना थिएन. तर पहिलो समय देखि हामी बाहिर गए, म त्यहाँ केही फरक उहाँलाई थियो थाह थियो. उहाँले म एक मान्छे मेरो उमेर पहिले देखेका कहिल्यै थियो तरिकामा सुसमाचारको बारेमा भावुक थियो. म पनि कहिल्यै डेटिङ मा यस्तो बुद्धिमानी दृष्टिकोण कसैले भेट. कलेज अघि आफ्नो चेला धन्यवाद उहाँले ईश्वरीय सम्बन्ध जस्तो हुनुपर्छ लाग्यो के ठीक थियो र त्यो सम्झौता गर्न इच्छुक थिएन.
म सुरुमा यो संघर्ष भनेर स्वीकार गर्नेछ. यो पनि गम्भीर र अत्यधिक देखिन्थ्यो. तर समय प्रभु मलाई समुदायसँग संतृप्त एक सम्बन्धमा बुद्धि देखाउन थाले, यौन र भावनात्मक शुद्धता, र विवाह गर्ने उद्देश्यका लागि डेटिङ. तपाईं तयार हुनुहुन्न भने विवाह गर्न, त्यसपछि प्रत्येक अरूलाई मन संलग्न यसको सायद एक राम्रो विचार. सुलेमानको गीत हामी यसको समय अघि प्रेम जगाउन गर्न चेतावनी दिए छन्. महिला रूपमा, हामी म मेरो मनको सुरक्षा भनेर तरिकामा हाम्रो सम्बन्ध सञ्चालन बारे भावुक थियो मानिसलाई भेट्दा धेरै भावनात्मक जगतले र यति हो, म एक keeper फेला थाह :)
2. हामी हाम्रो जीवनमा मानिसहरूले प्रोत्साहन थिए
हाम्रो विवाहपूर्वको समयमा हामी गर्न intimately हाम्रो सम्बन्ध संलग्न केही मानिसहरू आग्रह. तिनीहरू हामीलाई हाम्रो सीमा जवाफदेही राख्न र हामीलाई हाम्रो सम्बन्ध बुद्धिमानी निर्णय गर्न मदत. हामी पनि हामी पनि संलग्न भयो अघि विवाहको अघि हुने परामर्श गए. हाम्रो लागि अनुमति यी दुई कुराहरू पुरानो को बुद्धि खोज्न, समझदार भाइबहिनीहरू यो एक राम्रो विचार थियो कि वा बारेमा विवाह गर्न. परमेश्वरको एक कारण को लागि हाम्रो स्थानीय चर्च देखि pastors र mentors दिनुभएको छ. तिनीहरू हामीलाई बुद्धिमानीपूर्वक हाम्रो निर्णय मार्फत लाग्छ र ईश्वरीय बाहिर दृष्टिकोण दिन मदत. अलग सञ्चालन गर्दै छन् सम्बन्ध पाप र मूर्ख निर्णय को गम्भीर जोखिममा जोडे लागिरहेका छन्. म साँच्चै डेटिङ जोडे आफ्नो समुदायको अरू विश्वासीहरूलाई intimately आफ्नो सम्बन्धमा समावेश गर्न प्रोत्साहन हुनेछ.
3. प्रभु मलाई विवाहको सुन्दरता देखाए
कलेज मा एक freshman रूपमा म Superwoman सिंड्रोम कल गर्न चाहनुहुन्छ के थियो. म धेरै स्वतन्त्र थियो र क्यारियर संचालित, मानिसको आवश्यक्ता को विचार मा धेरै विरोध. मलाई लाग्छ छैन त्यहाँ स्वतन्त्र वा पेसा संचालित रहेको संग केहि गलत छ, तर मेरो हृदय मा यो भन्दा बढी थियो. म पुरुष र महिला लागि परमेश्वरको डिजाइन तिरस्कार थियो. म ठूलो भनेर बाहिर भने थियो कहिल्यै, तर यदि म इमानदार थियो, म बाइबल महिलाहरु बारेमा भन्न थियो लाग्यो के संग निराश थियो. हामी कमजोर छन्, हामी सिकाउन सक्दैन, हामी नेतृत्व गर्न सक्दैन, हामी घरपरिवारको टाउको छैनन्, र मेरो धेरै मनपर्ने, हामी एक कोमल र शान्त आत्माको गर्न हो. म एक कोमल र शान्त आत्माको तर केहि थियो लाग्यो र म मेरो व्यक्तित्व परिवर्तन रुचि थिएन. यी विचार सबै विवाह मलाई फिर्ता पकड थियो भन्ने कुरा थियो कि लाग्छ मलाई नेतृत्व. यो सबै पेसा सपना म थियो पछि लाग्दा मलाई राख्न थियो र केही दिन म संग अन्त हुनेछ 10 फार्ममा र आधा बच्चाहरु कहीं.
धन्न, वर्षौंदेखि प्रभु मलाई सिकाउनुभयो र के यो साँच्चै ईश्वरीय महिला हुन जस्तो देखिन्छ मलाई देखाए छ. भइरहेको ईश्वरीय महिला तपाईं गर्छन् वा के के द्वारा परिभाषित छैन. मलाई थाहा एक कर्पोरेट काम मा प्रभु विश्वासीपूर्वक सेवा गर्ने ईश्वरीय महिलाहरु प्रशस्त र जो घरमा विश्वासीपूर्वक छोराछोरीलाई र पति सेवा असंख्य महिलाहरु. बाइबलीय नारीत्व महिला रूपमा हाम्रो लागि परमेश्वरको अद्वितीय भूमिका समझ र देवता डिजाइन को सुन्दरता मा delighting बारेमा छ.
एक विवाहित महिला रूपमा म यो ईश्वरीय महिला हुन अर्थ बारे धेरै सिकेका र म मेरो पति वा मेरो विवाह गरेर तल साङ्लाले बाँधेर महसुस छैन. विवाहको लागि परमेश्वरको डिजाइन हाम्रो राम्रो र उहाँको महिमा लागि हो. जान्नु र विश्वास छ कि मेरो उमेर मा विवाह गर्न आत्मविश्वास दिनुभयो 22. दुई र आधा वर्ष पछि, म कुनै पनि पछुतो छैन, र म मात्र प्रभु हाम्रो विवाह आशीर्वाद जारी कि प्रार्थना गर्न सक्छौं.
Jdharden1 • अगस्ट 19, 2013 मा 7:53 छु • जवाफ
त्यो अचम्मको छ, परमेश्वरले उहाँलाई गर्न कलम हात गर्नेहरूलाई सबै भन्दा उत्तम प्रेम कथा कसरी लेख्न सक्छ. तपाईं जेसिका धन्यवाद, म साँच्चै यो आवश्यक. यो परमेश्वरको अधीनमा र उहाँको मेरो प्रेम जीवनमा आफ्नो बाटो गरौं एउटा 16yr पुरानो मलाई प्रोत्साहन. परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष.
Jannon Fitzpatrick • अगस्ट 19, 2013 मा 7:53 छु • जवाफ
मलाई यो मन पर्यो!! हामी एउटा सानो चर्च मा युवा pastors छन् र म सधैं किशोर बताउन, “त्यहाँ के तपाईं कहिल्यै सम्बन्धमा के हुनेछ केवल दुई कुरा छन्… 1) बिहे गर्नु 2) तोड. छुट्टिदै दुख्छ र सामान सिर्जना, त्यसैले तपाईं तयार छैनन् भने विवाह गर्न, यो एक सम्बन्धमा सुरु गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।” (भनेर एक सम्बन्धमा विवाहको लागि तयार हुन बढ्न छैन, तर म ज्यादातर कुरा छु 13-16 yr बच्चाहरु।) अधिकांश मानिसहरू यो एउटा सानो हुनेछ सोच सम्बन्धको सुरु, shortlived, रमाइलो कुरा. तर त्यसपछि भावना विकास, तपाईं पापमा, र त्यसपछि यसलाई प्राप्त गर्न भन्दा कठिन छ. हामी मुटु जोगाउन भने परमेश्वरले हामीलाई अनमोल रूपमा दिए, र यो दृष्टिकोणबाट सम्बन्ध मा जाने, एक ईश्वरीय मानिस वा स्त्रीलाई विवाह समाप्त यसलाई को दृष्टिकोण, हाम्रो वरिपरि आउँछ लागि हामी टाढा कम चोट र ईश्वरीय मानिस वा महिला परमेश्वरको छ कि समय भङ्ग हुनेछ! बाडेको मा धन्यवाद!!!
Demonslayer4god777 • अगस्ट 19, 2013 मा 7:54 छु • जवाफ
म साँच्चै खुसी म यो पोस्ट पढ्न लिंकमा क्लिक छु. म हुँ 25 र मेरो पति र म लगभग विवाह भएको छ5वर्ष. अब, म सबैलाई बताउन परमेश्वरले हामी विवाहित हुनुहुन्छ कारण छ कि पहिलो हुँ. तिमि जस्तो, मा 21, म देख थिएन न त म एक पति चाहनुहुन्छ गरे, म एक प्रेमी चाहनुहुन्छ गरे गोली छैन. 2007 वर्ष परमेश्वरको पूर्ण मेरो जीवन परिवर्तन भयो. जनवरी मा म उच्च थियो त्यसैले धर्म भन्दा सम्बन्ध थियो के परमेश्वर साँच्चै चाहन्थे बस पत्ता थिए(आध्यात्मिक) र जोस केही जस्तै म कहिल्यै अघि अनुभव थियो. म एक महिना पछि म विवाहित थियो थाहा अर्को कुरा. पागल म थाहा. तर म के भन्न सक्छौं…परमेश्वरले के गर्न हामीलाई भन्नुभयो. पाँच वर्ष पछि, हामी सँगै अझै पनि छन्, र ख्रीष्टको सँगै बढ्दै. अब, म हामी जस्तै कसैले यसलाई के गर्न रूपमा तीव्र गतिमा सल्लाह छैन. तर म यसलाई विरुद्ध सल्लाह छैन, यदि तपाईं परमेश्वरको नेतृत्वमा महसुस, र प्रार्थना र छिटो छ. म परमेश्वरको मात्र होइन आफ्नो विवाह बढ्न तर यो बलियो जारी कि प्रार्थना. म प्रत्येक अन्य तपाईंको प्रेम पनि बढिरहन्छ भन्ने प्रार्थना. म केहि पट्टी बाँध्नु, anyperson, कुनै पनि आत्मा, भनेर विभाजन गर्न प्रयास हुनेछ. म ठूलो संचार कौशल आशिषित छन् भनेर प्रार्थना, र वृद्धि धैर्य. परमेश्वरले तपाईंलाई राख्न सक्छ, येशूले नाम मा.
मत्ती NOVAK • अगस्ट 19, 2013 मा 7:54 छु • जवाफ
एउटा उदाहरण र जवान एकल र जवान विवाहित जोडीहरू लागि प्रोत्साहन रूपमा आफ्नो विवाहपूर्वको र विवाह प्रयोग गर्नु भएकोमा धन्यवाद मान्छे. आफ्नो विवाह परमेश्वरको महिमा लागि धन्यवाद, र ख्रीष्टको शरीर संग आफ्नो बुद्धि र अनुभव साझेदारी, जो ख्रीष्टको दुलही वास्तवमा छ, त्यसैले यो हामीलाई पनि हामी ख्रीष्टको दुलही जीवन बिताउन छन् कसरी एक चित्र दिन्छ. उहाँले यस्तो जवान उमेरमा तपाईं दुवै परिपक्व आफ्नो जीवनमा गरेको छ काम को लागि परमेश्वरको प्रशंसा.
Ariep17 • अगस्ट 19, 2013 मा 7:54 छु • जवाफ
वाह यो वास्तवमा ठूलो थियो! एक रूपमा 20 y.o. PPL मलाई IM पागल जस्तै विवाह गर्ने चाहना भएको हेर्न. म तपाईं मतलब द्वारा के केही विस्तार हेर्न प्रेम “भावनात्मक शुद्ध।” म भने के मा पनि trasparency प्रेम. परमेश्वरको yall आशीर्वाद
Philipns2511 • अगस्ट 19, 2013 मा 7:55 छु • जवाफ
मूलतः, जब त्यो भन्छन् “भावनात्मक शुद्ध” त्यो छैन बारेमा थप मान्छे विवाह वा तपाईं भनेर सोच्न प्रयास आफ्नो मनमा पहिले नै कुरा गर्नुपर्छ “विशेष” आफ्नो बस तपाईं डेटिङ हुनुहुन्छ किनभने. जस्तो अन्य पापी विचार गर्न सक्छ, “यौन कल्पनामा, कामवासना,आदि” तपाईं अन्य व्यक्तिको चरित्र आफ्नो दृष्टि तपाईं सम्बन्ध आफ्नो आफ्नै मनमा एउटा मूर्ति बनाउन भनेर clouded छ जब तपाईं भावनात्मक अशुद्ध छौं महसुस. त्यो किन हितोपदेश छ 4:23 द्वारा बाँच्न महत्त्वपूर्ण छ,किनभने हामी विशेष गरी एक स्त्रीको रूपमा, जस्तै उल्लेख गरिएको थियो, “भावनात्मक” प्राणीहरूलाई.
Ariep17 • अगस्ट 19, 2013 मा 7:55 छु • जवाफ
म अब धन्यवाद पायो. तपाईंको बिल्कुल सही. म संग संघर्ष गरेका छन्. त्यो मात्र अनावश्यक चोट जान्छ
Kerai पहेली • अगस्ट 19, 2013 मा 7:56 छु • जवाफ
मलाई यो मन पर्यो!!!!!!!!! कहिलेकाहीं तपाईं युग छैन मात्र एक किनभने तपाईं वरिपरि धेरै ज्यादातर साथीहरूले आफ्नो विचार जस्तो कि भूल जस्तो “बन्दूक कूद” मलाई धेरै मानिसहरू कि म तयार र IM पनि जवान wasnt, तर म साँच्चै विश्वास यो भगवान मेरो लागि भण्डारमा थियो के छ. मात्र म को उमेर मा प्रारम्भिक विवाह गरे किनभने म मेरो दिमाग दिन पछि डराएका थिए 18 म पनि म एक वर्ष भन्दा कम थियो मानिस विवाह र उहाँले मात्र थियो 19. हामी हाम्रो प्राण जस्तै तत्काल जडान सँगै हुन किस्मत थिए थिए, म थप अब उहाँलाई प्रेम म कहिल्यै Hes जीवनको लागि मेरो साथी छ र म केहि लागि यो परिवर्तन wouldnt भन्दा. हामी सँगै सँगै प्रार्थना र चर्च गए विवाहित भयो र हामी are..It हुनेछ सँगै यहाँ अब एक बच्चा थियो3फेब्रुअरी वर्ष र म अझै पनि म यो कदम गरे भनेर कुनै पछुतो :-) भगवान एक असल मानिसले मलाई दिनुभएको छ।. मेरो भाकल मलाई संसारमा अर्थ र म तिनीहरूलाई तोड्न wouldnt।. यसलाई राख्न म प्रेम जवान प्रेम यो पोस्ट को लागि धन्यवाद… तपाईं शायद कहिल्यै मृत्यु नुन अन्तिम जोडे हेर्न तर म मृत्यु नुन हामी छोडपत्र भाग भनेर दम्पतीले हुने प्रयास एक विकल्प छ!!
Adrienne केली • अगस्ट 19, 2013 मा 7:57 छु • जवाफ
परमेश्वरले तपाईंलाई दुई आशीर्वाद. उहाँले पक्कै किनभने तपाईंले उहाँलाई र पुरुष / महिला सम्बन्ध लागि उहाँको ईश्वरीय योजना विश्वसनीय र तपाईंले उहाँलाई आदर भनेर करार सम्झौता आयो र जीवनको लागि प्रत्येक अन्य. म त गर्व महसुस.
M.A.R.V. • अगस्ट 19, 2013 मा 7:57 छु • जवाफ
मन पर्यो!! ऐ yall एक नारी-अप बाइबलीय नारीत्व मा एक अन्तरदृष्टि र आफ्नो सबै wifes यसलाई के गर्नुपर्छ :)
Louib2001 • अगस्ट 19, 2013 मा 7:57 छु • जवाफ
Iwantstate01 • अगस्ट 19, 2013 मा 7:58 छु • जवाफ
जेसिका, तपाईं व्यावहारिक कुराहरू यात्रा केही आफ्नो विवाहपूर्वको समयमा भावनात्मक तवरमा आफ्नो मनको सुरक्षा गर्न गर्नुभयो साझेदारी सक्छ. म शारीरिक शुद्धता सीमा सेट बुझ्न. तर के यो भावनात्मक क्षेत्रमा व्यावहारिक जस्तै खोजे?
Purposedrivenjc • अगस्ट 19, 2013 मा 7:58 छु • जवाफ
यो मलाई विवाह मा एक नयाँ दृष्टिकोण दिनुभयो, धन्यवाद bunches
Kory Hagler • अगस्ट 19, 2013 मा 7:58 छु • जवाफ
मेरो हृदय साँच्चै प्रोत्साहन छ, बिल्कुल सुन्दर
रबर्ट Rivera • अगस्ट 19, 2013 मा 7:59 छु • जवाफ
सुन्दर!! परमेश्वरले तपाईंलाई मान्छे आशीर्वाद!! धेरै उत्साहजनक…
Punchyko • अगस्ट 19, 2013 मा 7:59 छु • जवाफ
वाह!!! राम्रो सामान, धन्यवाद यो ब्लग पोस्ट लागि धेरै! अनुग्रह&शान्ति0=)
Katherine2c • अगस्ट 19, 2013 मा 7:59 छु • जवाफ
म त यो पढ्न खाँचो!!! धन्यवाद!! म एक पटक संघर्ष कुराहरू सङ्घर्ष र म प्रभु र मेरो श्रीमान्को आदर गर्न चाहनुहुन्छ!!!! भन्यो भइरहेको, म P31 पत्नी हुने प्रयास जारी हुनेछ!!! धन्यवाद!!!
पावलले WenChih Anibal • अगस्ट 19, 2013 मा 7:59 छु • जवाफ
गरिरहेको लायक केहि पनि एक synergistic साझेदार संग राम्रो गरिरहेको लायक छ. … त्यसैले हामी लेख्न: http://mentoringmarriages.word…
आफ्नो लेख को लागि धन्यवाद.
ChosenV • अगस्ट 19, 2013 मा 8:00 छु • जवाफ
म साँच्चै आफ्नो ब्लग को लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद. यस 1st समय को लागि यो पढेपछि म देवता काम wow'd थियो. तीन महिना लाइन तल म फेरि यो पढ्न र म अझै पनि wow'd छु. म छु एक 22 वर्ष पुरानो महिला र marraige संग “सक्ने”, आफ्नो ब्लग trully प्रेरणादायक छ. यो मेरो मानिस परमेश्वरको यात्रा रूपमा सञ्चालित रूपमा हुन कि मेरो प्रार्थना छ हाम्रो सम्बन्ध मा मानिसको रूपमा आफ्नो भूमिका पूरा मामलामा थियो. भगवानले तिम्रो रक्षा गरुन:-)
Chelster • अगस्ट 19, 2013 मा 8:00 छु • जवाफ
मानिस माथि मा, त्यो, एक जोडी महिना पहिले, Jess कि यात्रा उनको छ उल्लेख “ढाकिएको,” र यहाँ उनले एक हुन प्रयोग कसरी कुरा “superwoman,” तर के ईश्वरीय सिक्न आए (अधीनमा) स्त्रीत्व जस्तो मानिन्छ छ.
तपाईं दुवै अधिक विशेष परमेश्वरको विचार विवाहमा पुरुषहरु र महिला भूमिका लागि हो भन्ने विश्वास के मा एक सानो कुरा त वा गर्न सक्छन्? Y'all आशिष् हो!!
निकोल गुलाब Munhawa • अगस्ट 19, 2013 मा 8:00 छु • जवाफ
म साँच्चै आफ्नो कहानी अद्भुत छ लाग्छ. तिमी दुवै विवाहको उपहार को सुन्दरता grasped र तपाईं साँच्चै मलाई प्रेरित गर्नुभएको. आफ्नो विवाहको बधाई र म अपमानजनक प्रेम लागि प्रार्थना तपाईं बीच साझेदारी गर्न. तपाईं लागि आनन्दित
Kayla_brown_1 • अगस्ट 19, 2013 मा 8:00 छु • जवाफ
किन खिचडी भेटेँ भनेर :(
Godgiven51 • अगस्ट 19, 2013 मा 8:01 छु • जवाफ
यस्तो बुद्धिमानी दृष्टिकोण,मेरी श्रीमती र म विवाह भएको छ5वर्ष र म सुसमाचारको हिप हप क्षेत्रमा पनि हुँ,यसको सधैं हामी यात्रा गर्दा प्रार्थना मेरो कुनामा उनको छ उत्कृष्ट,तपाईं पत्नीहरू हाम्रो जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण भाग प्ले,फेरि सीस के गर्दैछौ गर्नेगर!
Iolene_Branch • अगस्ट 19, 2013 मा 8:01 छु • जवाफ
म को सुरुमा ख्रीष्टको राम्रो महिला हुन यात्रामा आफैलाई राखे 2011 र म एक धेरै टाढा तरिकामा आएका छन् र म को अत्यन्तै गर्व हुँ भन्न पर्छ. मेरो यात्रामा परमेश्वरले मेरो बाटो मा अनमोल मानिस राखिएको र यो ब्लग पढेर निश्चित अन्तिम चिन्ह मेरो प्रार्थनाको खाँचो रूपमा यसको भाग प्ले छ.
म पनि लागि एक मानिस मा मेरो जीवनको बाँकी खर्च गर्न खोजी को कुनै मनसाय थियो 20 वर्ष पूरानो, तर यहाँ म हुँ, र यो ब्लग अत्यन्तै उत्साहजनक छ. मलाई आफ्ना सबै प्रयासहरूलाई उहाँलाई छेउमा उभिएर हुन लागि हुन र परमेश्वरले उहाँलाई त्यो हुनु आवश्यक छ मानिस हुन आकार रूपमा आफ्नो छेउमा हुन स्त्रीको परमेश्वरले मलाई सिर्जना.
यस को लागि धन्यवाद. म साँच्चै यो मूल्यांकन गर्छौं :)
अर्नोल्ड Mofor • अगस्ट 19, 2013 मा 8:01 छु • जवाफ
Whao, यात्रा र जेसिका! तपाईं वास्तवमा आफ्नो पाठ पुग्न-म कसरी टाढा क्यामरून छु थाहा छैन. म हुँ 25 yr पुरानो र हाल विषयमा मेरो भविष्य साझेदार परमेश्वरको खोजी गर्न परमेश्वरले विस्तारित समयमा एक दिन लिए. त्यसपछि म मिति चाहनुहुन्छ र अन्ततः विवाह स्त्रीको प्रकारको एक सूचीबारे / प्रार्थना अंक सूची संग आए. त्यसपछि एक दिन पछि म आफ्नो ब्लग भेट. म परमेश्वरले मलाई विशेष तरिकामा तयार छ लाग्छ. यो मेरो पत्नीको चेकलिस्ट / प्रार्थना अंक सूची छ:
GUENTER अर्नोल्ड पत्नी सूचीबारे / प्रार्थना बुँदाहरू सूची
समर्पित र बढ्दै मसीही
मेरो उपयुक्त सहयोगी
उनको आमाबाबुले पक्षहरूमा, उनको परिवार, मेरो उपस्थिति र अभाव मा अख्तियार र मलाई
मेरो सेवकाईमा मलाई भागीदार
सबै मा अधीनमा
एक कोमल र शान्त आत्मा छ
साझा समान विचार, संघर्ष, पीडा, कुनै रहस्य
बाहिरी सौन्दर्य-लुगा इच्छा छैन, गहना, बाल शैलीहरू
चतुर र उदार
मलाई एकदमै कठिन काम गर्ने इच्छा बनाउँछ
एंजेला जनसन • अगस्ट 19, 2013 मा 8:01 छु • जवाफ
कस्तो आशिष् तपाईं दुवै हुनुहुन्छ! उहाँसँग मा राख्दै गर! तपाईं गलत हुने छैन…..कहिल्यै! म जवान विवाह तर आत्माको नेतृत्व गरेका थिए जो र अरूको बुद्धि बिना हामीलाई पहिलो खोजी गर्न प्रोत्साहन……म आफ्नो बाटो रोज्ने जो जो हामी कहिल्यै सकेजति कुनै भन्दा अझ ठूलो छ आफूलाई लागि तिनीहरूलाई लागि आफ्नो योजना प्राप्त गर्न स्वयं तिनीहरूलाई स्थिति हुनेछ र कि आफ्नो योजना भन्न पर्छ “विचार” आफूलाई लागि….उहाँमा भरोसा!:) म विश्वास द्वारा र दृष्टि हिंड्नु छु (2 कोरिन्थी 5:7) वा म मेरो आत्म हत्या थियो……उहाँलाई बिना म कुनै राम्रो कुरा देखे. तपाईं परमप्रभु धन्यवाद सुखसुविधा र मलाई डोऱ्याउँदा कसले पवित्र आत्मा पठाउँदै लागि. येशू प्रभु हुनुहुन्छ! ( म अझै पनि विवाह छु र हामी दुवै <3 भगवान!) धन्य रहनुहोस्!:) धेरै <3 र शान्ति!:) तपाईं दुवै को धेरै प्रेरक पोस्ट गर्न, मुरी मुरी धन्यवाद!:)
aneetarh • अगस्ट 19, 2013 मा 8:03 छु • जवाफ
यू धन्यवाद यति जेसिका,DIS ठीक छ म सही NW आवश्यक wot. परमेश्वरको rilly यू मान्छे BLS. म एक ईश्वरीय relatnshp मा, 21 छु N मेरो प्रेमी हामीलाई चाहन्छ2प्राप्त ASAP विवाह. म म enuf परिपक्व थिएन महसुस कारण म परमेश्वरलाई धन्यवाद बीटी निश्चित यसलाई एक Gud विचार छ भने थियो4DIS,यो परमेश्वरको इच्छा खोरमा छ भने म पूर्ण रूपमा सदस्यता2यसलाई
Rchllnndreher • अगस्ट 19, 2013 मा 8:03 छु • जवाफ
मेरो थिए र रूपमा marride रही पछि वाह कारण नै हो अझै पनि मलाई म सही विकल्प म पनि परमेश्वरले यस यसलाई विगतका गोमा मात्र हाम्रो पास्टर बनाइएको जो अनुमोदन didnt दिनु समय छ एक छ भन्दै महसुस गरे विश्वास बनाउन के म भन्दा अन्य तरिकामा एक कठिन विकल्प परमेश्वरको निम्न थियो. म छु 22 र बस विवाह2मो पहिले. यो छोटो समयमा हुन सक्छ तर परमेश्वरले हामीलाई सँगै बढ्दै र हामीलाई धेरै सिकाउने छ(मेरो लागि माथि कसरी खोल्न नरम हुन र परमेश्वरले मलाई हुन सिर्जना रूपमा एक महिला हुन) यो पढ्न awsome थियो र म यो लेख्न समय धन्यवाद चाहनुहुन्छ. परमेश्वरको तपाईं र तपाईंको घर आशिष् दिनुहुन्छ सक्छ!
राहेल राइट • अगस्ट 19, 2013 मा 8:03 छु • जवाफ
Ya'll गवाही त दामी छ! यो ya'll विवाहित जवान प्राप्त गर्न सक्षम थिए सुन्न प्रोत्साहन छ छ. म को उमेर मा यस गर्मी विवाह रही छु 21 र परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै तरिकामा आशिष् र हामीलाई विस्मित र हामीलाई आशीर्वाद जारी छ! यी उत्थान ब्लग लागि दुवै बाट फेरि धन्यवाद!
Dfletcher812 • अगस्ट 19, 2013 मा 8:03 छु • जवाफ
म पुरा तरिकाले सहमत. म को उमेर मा विवाह 18. हो म एक बच्चा थियो तर, प्रभु मलाई बोल्नुभयो र मलाई विश्वास को एक फड्को लिन डराउनु र मैले गरे परमेश्वरको इच्छा गर्न आज्ञाकारी भएर भन्नुभयो. अब Im 24 तीन बच्चाहरू र मेरो पति र म संगीत को सेवकाईमा धेरै गहिरो हो. परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा केही असम्भव कुरा गर्नुभएको छ र मैले अन्य युवा महिला र परमेश्वरको जवान मानिसहरू परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिनीहरूको प्राण जोडीलाई दिइएको र सही निर्णय गर्न deiced छ भन्ने महसुस भनेर सुन्न.
अनि हामी भूल खिचडी, मरियम मा यूसुफ विवाह 14 उमेर र Birthed येशूको वर्ष, त्यो परमेश्वरको दृष्टि मा एक कुमारी र शुद्ध थियो. त्यसैले महिलाहरु र पुरुषहरु यू विवाह सम्म परमेश्वरको लागि शुद्ध रहन!!!
Grabiel Rivera • अगस्ट 19, 2013 मा 8:04 छु • जवाफ
ठूलो नै म र मेरो श्रीमतीलाई भएको छ भइ , म थियो 21 र त्यो थियो 18. हामी परमेश्वरले हामीलाई निर्देशन र हाम्रो विवाहमा होस् र अब उहाँले हाम्रो lifes र हाम्रो विवाहमा हामीलाई आफ्नो काम देखाउन. भगवान विवाह उपहासात्मक आशिष् राख्न सक्छ त्यो हाम्रो भगवान मा गरेको छ जस्तै आशीर्वाद
अदीस शिकारी • अगस्ट 19, 2013 मा 8:04 छु • जवाफ
आफ्नो गवाही लागि धन्यवाद, म थुप्रै तरिकामा तपाईं बताउन सक्नुहुन्छ. म संग दैनिक सङ्घर्ष भनेर स्वीकार गर्न छ “एक कोमल र शान्त आत्माको भएको” marrige..Like तपाईं को भाग, म थियो र अझै पनि धेरै संचालित र Indépendant छु , र मेरो पति घरेलू को टाउको रूपमा acknowledging र आफ्नो विचार गर्न पेश (हुँदा पनि म सहमत छु न) एक जवान पत्नी रूपमा मेरो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो. मलाई आफैलाई नम्र र हरेक तरिकामा मेरो पतिको submitt मदत गर्न हरेक दिन परमेश्वरको सोध्न. साझा लागि धन्यवाद.
cy हडसन • अगस्ट 19, 2013 मा 8:04 छु • जवाफ
तिमी मान्छे जवान विश्वासीहरूलाई यस्तो अविश्वसनीय आशिष् हो! म यी दुई ब्लग प्रेम र सबै उहाँले तपाईं दुई मार्फत मलाई कुरा छ परमप्रभुले धन्यवाद!
जेनिफर एन विक्रेता • अगस्ट 19, 2013 मा 8:05 छु • जवाफ
21 वर्ष पूरानो, र म तिमी मलाई वर्णन जस्तो लाग्छ. म निश्चित छ कि Superwoman सिंड्रोम. तपाईं आफ्नो प्रेरक गवाही लागि धेरै धेरै धन्यवाद, यो मलाई आशा दिन्छ :)
Orinthea Mckenzie • अगस्ट 19, 2013 मा 8:05 छु • जवाफ
म साँच्चै यो गवाही द्वारा प्रोत्साहन छु. परमेश्वरले तपाईंको संघ आशिष् दिनुहुन्छ सक्छ
Pulemolise • अगस्ट 19, 2013 मा 8:05 छु • जवाफ
thnx ALOT यात्रा र जेसिका,धेरै वयस्क nid2DIS हेर्न,म साँच्चै तिमी मान्छे द्वारा प्रोत्साहन रहयो,म उर पक्ष पूरक HW luv,-यात्रा एक ईश्वरीय महिला भेटे र जेसिका ईश्वरीय मानिस भेट,वाह!(dats यू थियो किन2बिहे गर्नु,lol!) एन हामी परमेश्वरको thnk4यू मान्छे,यू Wat को एक अंश पुरानो उमेर खिचडी evn मा एक युवा उमेर वेन वयस्क मा जिम्मेवार वयस्कbसक्नुहुन्छ dat व्यवस्थापन यू गर्दै छौ यू देखाइएको hv,ठूलो-अप2मा,एन परमेश्वरको जारी हुन सक्छ2bles उर विवाह बढी प्रत्येक दिन DT आउँछ
घर Ewansiha • अगस्ट 19, 2013 मा 8:06 छु • जवाफ
यो धेरै बारे मेरो सोच पायो
साइमन पल बेलायत ----- • नोभेम्बर 9, 2013 मा 5:55 बजे • जवाफ
यू यस्तो apowerful प्रोत्साहन लागि धन्यवाद यति जेसिका .AM 21 तर मैले सोचें बढ्दै हालतमा .माफ तपाईं चिन्ता गर्न सम्बन्धको ध्यान केन्द्रित alwalys, एक क्रिश्चियन सम्बन्धमा कसैले डेटिङ गर्छ meanyou धेरै व्यक्ति विवाह गर्न , त्यो देख उर सबै सम्बन्धले मिल्यो छ हुनत तपाईं केहिपनि चोट person..cos न for..n त्यो उनको hubby हुन uto माग …यू यस्तो विनाश कसरी सामना?????thxx.
Kaila • नोभेम्बर 14, 2013 मा 9:36 बजे • जवाफ
म यो awhile पहिले लेखिएको थियो थाहा र मैले बल्ल यो पढ्न मौका पायो. तर, मलाई यो पढ्न लागि यो राम्रो समय थियो अनुमान. देखिन्छ परमेश्वरले कुराहरू मा उहाँलाई फिर्ता राख्न समय मलाई बताउन वरिपरि साना कुराहरू राख्दै राख्छ जस्तै. र म मेरो प्रेमी संग मात्र होइन मेरो सम्बन्ध के यो फिर्ता उहाँलाई आवश्यक छ विचार, तर यो उहाँले चिल्लो कुराहरू बाहिर मदत गर्न सक्छ भनेर देखाउँछ.
म पनि फेला यो रोचक म Superwomen सिंड्रोम रूपमा मेरो मानसिकता लाग्यो कहिल्यै, तर म निश्चित म मेरो काम मद्दत चाहिन्छ भन्न सक्छन्. जब म यसलाई भावनात्मक हुन वा बुद्धिमानी काम कि धेरै लिन प्रयास कसरी मेरो प्रेमी मलाई वर्णन छ.
कोल्टनसित • फेब्रुअरी 10, 2014 मा 5:00 बजे • जवाफ
हे यात्रा! म पढ्न यी ब्लग दुवै, अनि तिनीहरु (परिवार र साथीहरू को ईश्वरीय सल्लाह साथ) अत्यन्तै उपयोगी मलाई पछिल्लो केही महिनामा भएको. म थाह मलाई विवाह गर्न लागि परमेश्वरको छ केटी भेट गर्नुभएको, र हामी उहाँको समय मा पर्खिरहनु. यो तपाईं थिए पनि अघि हामी विवाहित अन्त हुनेछ भनेर एकदम सम्भव छ, वा कम से कम त्यसपछि द्वारा!
तपाईं के सल्लाह विवाह गर्न तयार हरेक अन्य तरिकामा छ जो कसैले दिन थियो, एक घर प्रदान गर्ने क्षमता बाहेक (किनभने उपस्थित कलेज को)?
Nadene • सक्छ 24, 2014 मा 5:38 बजे • जवाफ
यो सुन्दर थियो. म यो कति आवश्यक व्यक्त गर्न सक्दैन :'). परमेश्वरको साँच्चै विश्वासी छ!
Myles • सेप्टेम्बर 4, 2014 मा 4:52 बजे • जवाफ
धन्यवाद जेसिका देवता सत्य थियो कि म सुन्न थियो!
Femi • फेब्रुअरी 21, 2015 मा 1:34 बजे • जवाफ
जेसिका साझेदारी गर्नु भएकोमा धन्यवाद. यो पक्कै पनि डेटिङ मा मेरो दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ; यसको समय अघि प्रेम जगाउन छैन. मदहोश!
लिली • जुन 11, 2017 मा 12:47 छु • जवाफ
विषय मा आफ्नो अनुभव र बुद्धि बाँड्नु भएकोमा धन्यवाद. पढाइ यो मलाई थप तपाईंलाई थाहा भन्दा मदत गरेको छ.